Vovoka welding E6013 amin'ny fanaovana electrode welding, izay karazana electrode vy karbonika misy vovoka vy karazana titania. AC / DC. Welding amin'ny toerana rehetra. Manana fahombiazana tsara izy io ary saika tsy misy spatter. Mora ny fandrehitra indray, ny famaohana ny slag tsara, ny fisehoana milamina tsara. Kilasy iraisana sy naoty rutile azonao safidiana.
1. Fitokonana faingana & famerenam-bidy mora & fanesorana mora
2.Fampisehoana arc azo antoka & fanelingelenana arc kely
Fisehoana 3.Smooth sy mamirapiratra ary toetra mekanika tena tsara
4. Fahombiazana avo lenta sy sanda misy fiantraikany lehibe amin'ny -30c.
5. Taham-pidiovana avo lenta
6. fanoherana mitresaka tena tsara sy fampisehoana x-ray
7. fonosana: fonosana harona 300kgs damproof; na arak'izay takinao
1.Electrode dia tsy maintsy ankatoavin'ny 350-380 ℃ mandritra ny adiny 1 alohan'ny ahodina, maina ny elektroda rehefa mampiasa azy.
2. Ny harafesina, solika, rano ary loto hafa amin'ny lasitra dia tsy maintsy esorina alohan'ny fikajiana.
3.You tsy maintsy mampiasa welding arc fohy, ny savily tsy tokony ho lehibe loatra, tery vakana vakana mety.
4. Mba hisorohana ny famokarana porosity arc, ny plate plate dia tokony horaisina na hampiasa fomba fiverenana ho an'ny welding arc.
singa TiO2 AL2O3 SiO2 Mn CaO + MgO voajanahary Hafa
Vokatra tena izy 42 4.5 28 9 10.5 4 2
Welding electorde vovoka E7018, E6011, E6010, E7024, sns koa azo alaina. Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Fepetra takiana amin'ny teknika:
Ny faritra ilaina amin'ny welding dia tokony asiana marika mazava mifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika rehefa manomana ny famaritana ny fomba fanao welding.
Ny fanangonana ny bobongolo (fametahana fihaonam-be) amin'ireo faritra nohosorana, ny habetsaky ny fihenan'ny fantsom-bozaka dia tsy maintsy dinihina. Tokony ho azo antoka fa ny fandeferana amin'ireo ampahany mihombo dia ao anatin'ny fepetra famolavolana.
Alohan'ny hamoriana azy dia esory ny harafesina, menaka, vovoka ary hamandoana ao anatin'ny 25mm amin'ny lafiny roa amin'ny lasitra. Ho an'ny welds manan-danja amin'ny vy firafitry ny alika ambany dia tokony hesorina ny refin'ny oksida.
Ny hantsana fivoriambe dia tokony fehezina mandritra ny fivoriambe. Ny elanelan'ny lasitra volo dia 2 ~ 3mm, ary ny elanelan'ny lasitra fanenomana dia 0 ~ 2mm. Rehefa lehibe loatra ny banga eo an-toerana dia andramo apetaho amin'ny habeny voatondro. Fady mafy ny mampiditra mpameno ny banga, ary ny fiarahana matanjaka dia voarara mba hampihenana ny adin-tsaina sisa tavela amin'ireo singa lasitra.
Ny fitaovana fehin-kibo sy ny mason-tsivana ampiasaina amin'ny fantsom-panafody dia tokony hitovy amin'ny fepetra takiana amin'ny las.
Ny asa fanamafisam-peo dia tsy azo atao raha tsy efa nandalo ny fizahana ny fivorian'ny faritra.
Ho an'ny fitaovana vaovao sy ny fizotrany vaovao dia tsy maintsy atao ny fanandramana ary afaka ampiasaina izy ireo aorian'ny fahaizany.
Ny fantsom-bozaka sy ny lesoka eo am-pototry ny lasitra dia tsy maintsy esorina alohan'ny fangejana ny lasitra mihodina amin'ny lasitra sy lasitra hafa
Ny fanamafisana dia azo atao aorian'ny fanadiovana.
Alohan'ny fametahana dia fady ny manomboka ny fandrehitra aretin-tsaina sy hizaha toetra ny fanitsiana ankehitriny ao amin'ny faritra tsy misy fantsona. Rehefa vita ny welding dia tokony diovina sy hatao maina ny tampon'ny las-las.
Net, ho an'ny ampahany matevina manan-danja amin'ny faritra welding penting, ny marika welder dia tokony homarihina amin'ny toerana mety aorian'ny fangejana.
Ho an'ny takelaka vy misy hatevin'ny 0.3 ~ 4mm, ny fomba famafana toy ny fantson-drivotra vy vita amin'ny metaly na ny welding argon tungsten no ampiasaina matetika.
Ho an'ny famafazana singa vy tsy mitovy, electrodes, tariby ary flux misy naoty mitovy hery dia tokony hofidina.
Rehefa mamatotra vy mirafitra firaka ambany, tsy tsara ny mijanona eo afovoany, ary miezaha hamita indray mandeha ny welding! mandritra ny fantsom-bozaka maro sosona, ny tsangambato eo anelanelan'ny sosona dia tokony hivezivezy ary ny mari-pana eo anelanelan'ny sosona dia tokony fehezina eo anelanelan'ny 250 ~ 300 ℃. Alohan'ny hamehezana ny sosona seam manaraka, dia tokony diovina izy io. Zahao ny lasitra amin'ny sosona ambony mba hahazoana antoka fa tsy misy kilema.
Teo aloha: Surfacing Welding Rod D608
Manaraka: Steel malefaka mikraoba vy AWS E6010
Vovoka Welding Exothermic
Powder Flux Welding
Lasary vovoka vy
Varahina welding vy alimo Silicon Bronze Weldin ...
Valve sy valantsara Surfacing Welding Electrodes D507
Tora-by vita amin'ny alimo varahina CuZn40Fe1Sn1 ambany
WL20 Lanthanum Tungsten Electrode ho an'ny welding WIG
Tsorakazo vy tsy mitovy, Atsofohy vy vy vy, vy vy, Kavina vy 1.5 Mm, electrode welding, Ss Welding Electrode,